Fikarohana momba ny firaisana Inona ny dikan'ny fiainantsika, ny lasa, ny ankehitriny sy ny hoavintsika? Ahoana no ahafahan'ny porofon'ny Reincarnation mamorona tontolo milamina kokoa - Reincarnation fikarohana
Voasoratra ho an'ny Mpanoratra tena mahay notantanan'i Nicolae Tanase
Hizaha horonan-tsary Viral: Porofon'ny maha-teraka indray ao amin'ny vatana vaovao
Fikarohana Reincarnation an'i Ian Stevenson, MD
Betsaka ny porofo mifototra amin'ny fandalinana tranga momba ny ankizy izay mitadidy fahatsiarovana ny fiainana taloha mba hanatsoahana fa ny reincarnation dia misy. Ny tranga sarotra indrindra dia avy amin'ny asan'ny Ian Stevenson MD tao amin'ny University of Virginia.
Nandritra ny vanim-potoana 40, Dr. Stevenson dia nitety an'izao tontolo izao nandalina ny ankizy tamin'ny fahatsiarovana an-tsitrapo ny fiainana taloha izay mety ho voamarina. Manodidina ny 1200 amin'ireto trangan-javatra trandrahana voamarina ity dia nisy, izay nohamafisin'ny Dr. Stevenson tamim-pahatsorana. Ny tranga roa izay tena mahavariana satria narahina nandritra ny fe-potoana teo amin'ny 30 taona ary mampiseho ny endrika mitovy amin'ny fiainana andavanandro ka hatramin'ny iray dia:
Avy amin'ny fandalinana raharaha mahaleo tena manokana, toy ny avy amin'ny University of Virginia, ny fitsipiky ny reincarnation. Anisan'izany ny tsikera fa ny endrika sy talenta ary filàna endrika dia mety hijanona tsy miova hatramin'ny fiainana ka hatrany amin'ny fiainana. Fanampin'izany, ny fikarohana dia mampiseho fa miverina miaraka amin'ny olona fantatsika talohan'ny nahitana azy. Mba hahalala ny fomba fiasan'ny reincarnation, azafady diniho jerena:
Ahoana no ahafahan'ny Reincarnation Research mamorona tontolo milamina kokoa
Ny zavatra iray manan-danja indrindra amin'ny fikarohana reincarnation dia manambara fa ny olona tsirairay dia afaka manova ny fivavahana, ny zom-pirenena ary ny firazanana amin'ny fiainana iray. Ity fitandremana ity dia misy hery manampy amin'ny famoronana tontolo iray milamina kokoa, satria ny fifandirana sy ny ady dia matetika mifototra amin'ny tsy fitoviana amin'ireo marika ara-kolontsaina ireo.
Ny raharaha iray mahavariana amin'ity lafiny ity dia mahakasika ny famerenana indray an'i Anne Frank. Nenjehina ho Jiosy i Anne Frank ary maty tao amin'ny toby fitanana Nazi. Raha ny fandinihako dia natsangana indray izy ho Barbro Karlen, teraka tamin'ny fianakaviana kristiana tany Soeda. Raha nahafantatra ny Nazia fa mety ho teraka jiosy ny lahimatoa iray ary Kristiana amin'ny iray hafa, dia tsy ho nitranga ny Famonoana Tambabe. Toy izany koa, raha fantatry ny silamo fa afaka miverina ho indray izy ireo amin'ny maha Kristiana na jiosy ary ny mifamadika amin'izany dia tapitra ny ady hitantsika any Atsinanana. Azafady mba jereo kely ireto pejy manaraka ireto.
Ny zavatra heveriko fa tena lehibe indrindra ny tranga reincarnation fikarohana tsy miankina dia voaangona ao amin'ny bokiko ateraka indray.
Ny tanjon'ny Reincarnation
Na dia mandinika be momba ny fizotran'ny fahaterahana indray aza ny fikarohana reincarnation, tsy ny fanontaniana rehetra no azo valiana amin'ny alàlan'ny porofon'ny fiainany taloha. Ohatra, ny isan'ny isan'ny androm-piainantsika ary ny tanjon'ny reincarnation amin'ny ankapobeny dia mijanona ho tombatombana ihany.
Mba hamenoana ireo banga izay misokatra amin'ny fikarohana reincarnation dia nampiasa loharanom-baovao hafa aho. Hatramin'ny 2001 dia niara-niasa aho Kevin Ryerson, ilay trance medium izay asongadin'ny bokin'i Shirley MacLaine. I Kevin dia mamita torolàlana fanahy antsoina hoe Ahtun Re, izay niresahako isam-bolana nanomboka tamin'ny 2001. Ahtun Re dia manana fifanakalozan-dresaka matanjaka aho ary mandritra ny fotoana kelikely, dia nahatsapa aho fa fanahy tokoa i Ahtun Re amin'ny fisainan'i Kevin Ryerson. Ahtun Re dia manana ny fahalalana rakipahalalana momba ny rakipahalalana ary efa nasehony koa ny fahaizana mametraka ny lalao taloha. Ireo tranga izay maneho ity fahaiza-manao ity dia azo jerena amin'ny pejy manaraka:
Ireo olana momba ny fiainana taloha dia voavaha tamin'ny alàlan'i Ahtun Re
Ny tranga iray mahavariana dia: Tranom-pantavanandro any an-danitra i Thomas Edison | Elon Musk
Ny fifanakalozan-kevitra noraisiko tamin'i Ahtun Re momba ny fanontaniana sary lehibe dia fintina ao amin'ny bokiko Ny niandohan'ny fanahy sy ny tanjon'ny fanambadiana. Raha fintinina:
Ny niandohan'ny fanahy
Rehefa noforonina ho fanahy isika, izay fanehoana an'Andriamnitra tsirairay avy, ny tsirairay avy amintsika dia voagejan'ny angovo sy ny fahaizana manokana, ny fika niantsoana ny herin'ny angovo. Ireo toetra ireo dia manondro antsika hanaraka ny lalana sy ny asa sasany. Noho izany, ny mozika dia mirona mitombo ankehitriny amin'ny maha mpitendry mozika azy, ny mpahay siansa dia mirona hamorona indray ary manenjika ireo fikarakarana amin'ny siansa na teknolojia ary ireo mpikatroka ara-tsosialy dia mikendry ny handray andraikitra mavitrika mandritra ny androm-piainany. Rehefa mifoha amin'ny maraina isika miaraka amin'ny toetra tsy miova mandritra ny alina teo aloha, manomboka amin'ny fahavelomana ka hatrany amin'ny fiainana, dia mitovy amin'ny fomba hanatonantsika ny fiainana. Ny fomba hanehoantsika ny herintsika dia azo ovaina amin'ny lova génétika sy ny fiainana miaina izay iainantsika.
Reincarnation sy ny fananganana ny maha-izy azy
Tamin'ny dingana voalohan'ny fahatongavana ho andraikitra lehibe dia ny famolavolana fahatsiarovan-tena. Alaivo sary an-tsaina raha amin'ny fotoan-dehibe ankehitriny dia tsy tadidinao ny zava-nitranga talohan'ny fotoana ankehitriny. Tsy hanana na iza na iza ianao. Ny fanandramana amin'ny alàlan'ny andian-taona maro dia manorina ny maha-izy azy. Miankina amin'ny finoana, ny maha-firenena ary ny foko ny fahaiza-miaina. Rehefa mbola fanahy mbola tsy ampy taona isika, ny fampahafantarana ireo anton-javatra ireo dia mety hatanjaka tokoa, ka mahatonga ny fisarahana sy ny ady. Adinonay fa avy amina loharano iray daholo isika rehetra.
Rehefa mamerina indray isika dia afaka manao hadisoana ary mandratra ny hafa miteraka karma izay tsy maintsy tanterahina amin'ny fahatongavana ho tonga nofo.
Tahaka ny zaza tsy maintsy mandia sekoly sy mianatra amin'ny hadisoana raha lasa olombelona mahavita tena isika, toy ny fanahy mamorona amin'ny alalàn'ny fiainana eto an-tany.
Lasa fanahy iraisam-pirenena amin'ny alàlan'ny Reincarnation
Rehefa avy mametraka ny maha-izy azy mafy isika dia amboary ny fahaizantsika amina ampy, miasa karma ary hahatratra ny fitiavana ny maha-olombelona rehetra, tsy mila miverina ho velona intsony isika fa afaka manohy traikefa sy fitomboana eo amin'ny sehatra ara-panahy. Raha ny salanisa, Ahtun Re dia milaza fa mandritra ny 100 mandritra ny fotoana dia hahatratra hatrany amin'ny fampandrosoana izany. Io isa io dia afaka miovaova tanteraka amin'ny fahatsapan'ny fanahy iray manenjika fitomboana ara-panahy sy fivoarana amin'ny alàlan'ny fahatongavan'izy ireo.
Betsaka, na izany aza, dia mbola misafidy ny ho tonga nofo indray, na dia tsy mila izany aza, mba hanohanana tetikasa hanampiana ny olombelona hivoatra. Ahtun Re dia nanombana fa farafaharatsiny 20% ny mponina eto an-tany dia eto an-tsitrapo.
Reincarnation: Ankafizo ny dia
Misy fotoana mety ho mafy be ny fiainana. Mandritra ireo vanim-potoana ireo dia mety hatahotra ny ho lasa reincarnate isika, saingy manao izany amin'ny faran'izay bitika indrindra isika. Raha izany dia tokony hiezaka hitandrina ny zavatra rehetra isika, tsara fanahy amin'ny hafa ary hankafy ny dia araka izay tratra.
Walter Semkiw, MD aprily 7, 2015